Thola Izinkinga Zokubuka
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Thola Izinkinga Zokubuka
Lapho uhlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene lapho usebenzisa i-Outlook yakho, ungahlola inkinga bese uthola isisombululo.
Okokuqala, kungenzeka ukuthi izizathu ezahlukahlukene zizodala inkinga efanayo noma uphawu, ngakho-ke udinga ukuthola isizathu sangempela ngaphambi kokuthola isixazululo saso. Izizathu ezivamile yilezi:
Ezinye izengezo ze-Outlook Add-Ins ezidala inkinga.
Ifayela lakho le-Outlook PST lilimele noma lonakele.
Iphrofayili yakho ye-Outlook yonakele.
Ukufakwa kwakho kwe-Outlook noma ukumiswa akulungile.
Ukuthi ngabe inkinga ibangelwa isizathu 1, ungaqala ukhubaze konke okungeziwe ku-Outlook, ngokulandelayo:
Chofoza u- “File”> “Izinketho”
Kwingxoxo Yezinketho ze-Outlook, kusuka kubha eseceleni yangakwesobunxele, chofoza "Faka-Ins".
Ewindini elikhulu, chofoza inkinobho ethi "Iya" ezansi kwewindi.
Ku-COM Add-Ins dialog, ungakhethi yonke i-Add-Ins, bese uchofoza inkinobho ethi “KULUNGILE”.
Vala i-Outlook bese u-restart it.
Lokhu kuzokhubaza konke okungeziwe ku-Outlook yakho. Uma inkinga inyamalala ngemuva kwe- restarting Outlook, khona-ke inkinga ibangelwa isizathu 1. Ngaphandle kwalokho, udinga ukuqhubeka nenqubo elandelayo.
Thola ifayela lakho le-PST ngokulandela imiyalo ku- lesi sihloko.
Kopisha ifayela lakho le-PST kwenye ikhompyutha ene-Outlook efakiwe.
Start Outlook kukhompyutha entsha, bese usebenzisa i- “File” -> “Open” -> “Outlook Data File”, ukuvula ifayela le-PST.
Uma ifayili le-PST lingavuleki, noma kunemilayezo yamaphutha lapho uvula ifayela, khona-ke ifayela lakho le-PST lonakele ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthi inkinga yakho ibangelwa isizathu sesi-2, ngaphandle kwalokho, uma ifayela le-PST lingavulwa ngaphandle kwezinkinga, ifayela lakho le-PST kufanele libe nempilo futhi isizathu singu-3 noma u-4.
Ngesizathu 2, ungabheka lesi sihloko ukulungisa inkinga.
Ngesizathu sesi-3 nesesi-4, udinga ukuqhubeka nenqubo yokuhlaziya, ngokulandelayo:
Iya ku-Start Imenyu> Iphaneli yokulawula> Imeyili.
Chofoza "Bonisa Amaphrofayli"
Chofoza "Engeza”Ukufaka iphrofayili entsha.
Engxenyeni engezansi yengxoxo, setha iphrofayili entsha njenge- “When starukusebenzisa iMicrosoft Office Outlook, sebenzisa le phrofayili ”
Khetha iphrofayili entsha eyenziwe, bese uchofoza ku- “Izakhiwo"
Faka ifayela le-PST kuphrofayela entsha.
Restart i-Outlook yakho. Uma inkinga yakho ye-Outlook inyamalala, khona-ke isizathu siyi-3 futhi usuyilungisile inkinga yakho. Ngaphandle kwalokho, isizathu ngu-4.
Ngesizathu 4, lapho ukufakwa kwakho kwe-Outlook akulungile futhi kungadingeka ukuthi uphinde ufake i-Outlook noma i-suite yonke ye-Office. Noma uma unesipele sohlelo lwakho, lapho-ke ungabuyisela uhlelo lwakho endaweni eyisipele lapho ungasebenzisa i-Outlook ngaphandle kwezinkinga.